Araka ny anganoHanova
Rabiby sy Ralambo: mpanjaka nalaza teo AmbohidrabibyHanova
Tamin'ny Andrianampoinimerina (1787-1810) dia nametrahany ny vadiny natao hoe Rasendrasoa teo Ambohidrabiby. Ambohidrabiby moa dia menabe fa tsy menakely no tsy vodivona koa tsy tompombodivona no tsy tompomenakely i Rasendrasoa, nefa dia nanana ny lazany koa izy. Raha tsiahivina, rehefa niamboho i Rabodonimerina vadin'ny mpanjaka Andrianampoinimerina dia Rasendrasoa no lasa vadiben' Andrianampoinimerina. Rasendrasoa moa dia zafin'Andriampolofantsy ao Atsomangy. Na dia zanadralambo amin'Andrianjaka aza no firazanan'Andriampolofantsy, nisy tamin'ny terak'Andriampolofantsy kosa no natao ho Andriamasinavalona ny firazanany, isan'ireny ny taranak'Andriamanitrirazaka lahiaivon'Andriampolofantsy nipoiran-dRasendrasoa. Koa Andriamasinavalona fa tsy zanadralambo amin'Andrianjaka akory arak'izany ny firazanan-dRasendrasoa na dia taranak'Andriampolofantsy izy ary avy ao Ambohitsoa no fiaviany. Rapoenty zafin-dRasendrasoa sy Andrianampoinimerina no saika hasandratra ho mpanjakan'i Madagasikara tamin'ny taona 1863. Rabemaso zafin-dRasendrasoa sy Andrianampoinimerina kosa no printsin'Avaradrano sy Marovatana tamin'ny fiafaran'ny fanjakan'andriana teto Madagasikara tamin'ny taona 1895. Mbola ao antampon'Ambohidrabiby mandrak'ankehitrio ny fasana-dRasendrasoa.
Fizaran-tany teo AmbohidrabibyHanova
Fandaminana ny rova sy ny lapaHanova
Ny vavahadin'ny rovaHanova
Fandaminana ny anaty rovaHanova
Fandaminana ny anatin'ny lapaHanova
Fizaran-tany teo Ambohidrabiby sy ny manodidinaHanova
Fonenan'ireo zana-dRalambo sy ny vahoakanyHanova
Ny fandaminana ny fasanaHanova
Nanafatra kosa anefa Ralambo fa rehefa miamboho izy dia eo atsimon'ny fasana nanafenana an-dRabiby sy Ramaintsoakanjo ary Andriandambotanimanjaka no hanorenana ny fasany sy ny an'ireo vadiny. Izany fandaminana izany dia maneho, araka ny fomba merina, fa Rabiby sy ireo doriany dia nataon-dRalambo ho ambony firazanana noho Ralambo sy ireo taranany. Ny antony angamba dia noho ny hasin-dRabiby raibeny sy noho ny fifanarahana nisy teo amin-dRabiby sy Andriamanelo momba ny nampanjakana an-dRalambo ary ny amin'ny maha-manara-dreny an-dRalambo teo Ambohidrabiby. Tsy sahy nihoatra an-dRabiby raibeny arak'izany i Ralambo fa nanome hasina azy ho amin'ny avaratra. Nahatakatra ny tantara fonosin'ny filahatry ny fasan-dRabiby sy Ralambo eo Ambohidrabiby ny mpanjaka Andrianampoinimerina ka nanafarany fa eo amin'ny avaratry ny fasan-dRabiby no anorenana ny fasan-dRasendrasoa vadiny sy ireo taranany, koa ao no misy ny fasan-dRasendrasoa.
Koa hatramin'Andrianampoinimerina dia toy izao ny filahatry ny fasana 7 miandalana ao amin'ny rovan'Ambohidrabiby, araka ny filaharany avy avaratra mianatsimo : ny fasan-dRasendrasoa miloloha trano masina (sady misy ireo taranany) no avaratra indrindra, fasana izay tsy azo anafenana Vazaha na Safiotra satria Andrianampoinimerina dia tsy nanaiky ny hidiran'ny Vazaha taty anivon-tany indrindra tamin'ireo tendrombohitra 12 masina. Eo atsimon'ny tranomasin-dRasendrasoa ary mitohoka aminy dia misy ny fasan'i mpanjaka Rabiby. Mitohoka aminy eo atsimony ny fasan-dRamaintsoakanjo. Mitohoka eo atsimony kosa ny fasan'Andriandambotanimanjaka. Eo atsimon'io kosa ny lalan-kely mivoaka amin'ny vavahady andrefan'ny rova. Eo atsimon'ny lalankely, ny fasan'ny mpanjaka Ralambo. Mitohoka amin'io eo atsimo ny fasan-dRatsitohinamanjaka. Ary mitohoka amin'io sy amin'ny atsimo indrindra ny fasan'ny zanaka vavin-dRalambo sy Ratsitohinamanjaka, izay very anarana nefa lazain'ny lovantsofina fa vadin'Andriandambotanimanjaka. Izany fasan'andriana miisa 7 ao Ambohidrabiby izany dia endriky ny fahafenoan'ny hasina sy ny tontolo eo amin'ny vohitr'Ambohidrabiby sy ny fahatanterahana ary ny fitohizan'ny taranaky ny mpanjaka mandrakizay doria.
Fandaminana ny tanàna taty aorianaHanova
Fombafomba merina teraka teo AmbohidrabibyHanova
Ara-politika sy sosialy ary toekarenaHanova
Ambohidrabiby mitaha amin'ny vohitra hafaHanova
Lovabe tsy mialonjafy sy hasin'ImerinaHanova
Ambohidrabiby no "lovabe tsy mialonjafin'Imerina" satria na iza Zanadralambo, Zanakandriana, Andriandoriamanjaka, Zazamarolahy, Andriamasinavalona, Zanakandriamamilaza, Andriantompokoindrindra, Andrianamboninolona, Andriandranando, Zanadravoromanga dia samy taranaky ny mpanjaka Rabiby nanjaka sy nafenina teo Ambohidrabiby. Ary ireo olona rehetra mitonona ho isan'ny foko merina dia teo Ambohidrabiby no nahateraka izany anaram-poko izany sy ivon'izany foko izany tany amboalohany. Ambohidrabiby koa no atao hoe "hasin'Imerina", satria eo Ambohidrabiby no nafenina mandrakizay doria ny hasin'andriana sy ny hasin'ny fanjakana merina.
Renivohitr'Imerina faha mpanjakaHanova
Ireo olo-malazan'Ambohidrabiby fahizayHanova
Tsongaina manokana amin'ireo ireto olo-malaza teo Ambohidrabiby nanomboka tamin'ny taonjato faha-16 ka hatramin'ny taona 1895: Rabiby, Ralambo, Ramaintsoakanjo, Randapavola, Rabefaravolamanjaka, ireo Andriandoriamanjaka, Ravoromanga, Andrianavalomanotronimerina, Rasendrasoa, Andriamiharantsoa, Rainitavimaserana, Raberanto, Lehilava, Rabemaso, Rainimazaoro Razakanavalona, ary Randriambola.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambohidrabiby&oldid=978633"
Dernière modification le 23 Desambra 2019, à 13:12
Voaova farany tamin'ny 23 Desambra 2019 amin'ny 13:12 ity pejy ity.